Mouse (2021) Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Mouse (2021) Complete
TMDb: 8.2/10 10 votes
StarringJo Jae-yoon, Kim Young-jae, Kyung Soo-jin, Lee Hee-jun, Lee Seung-gi, Park Ju-hyun, Woo Ji-hyeon
Synopsis of Mouse (2021) Complete
Vagabond ပွီးထဲက လှမျးနရေတဲ့ မငျးသား Lee Seung Gi နဲ့ Oh! My Gran movie ထဲက မငျးသား Lee Hee Jun တို့ပါဝငျထားပွီး မငျးသမီးတှကေ Zombie Detective(2020) ထဲက Park Joo Hyun နဲ့ Train(2020)ထဲက Kyung Soo Jin တို့ပဲဖွဈပါတယျ။ အပိုငျးအရအေတှကျက (၂၀)ပိုငျး ပါဝငျမှာဖွဈပွီး အပတျစဉျ (ဗုဒ်ဓဟူးနဲ့ကွာသပတေး)နမြေ့ားမှာ tvNရုပျသံကနေ ထုတျလှငျ့ပွသှားမှာဖွဈပါတယျ။
ဇာတျလမျးရဲ့အဓိကခကျြက ဒီမေးခှနျးနဲ့ စတငျတယျ
“မငျးသာ မြိူးရိုးဗီဇစမျးသပျခကျြကနေ မိခငျဝမျးထဲမှာပဲ စိတျပညာကို စမျးသပျနိုငျမယျဆို….ပွီးတော့ အဲ့ကလေးက ဆိုကျကိုတဈယောကျဖွဈမယျဆိုရငျ မငျး အဲ့ကလေးကို မှေးဖှားခှငျ့ပေးမှာလား”
Jung Ba Reum ဟာ ရဲဝနျထမျးအသဈတဈယောကျဖွဈတယျ။ တာဝနျကနြခြေိနျ အစဉျလိုကျလူသတျသမားတဈယောကျနဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျကွုံတှလေို့ကျရတယျ။ ကံကောငျးလို့မသပေဲ အဲ့အဖွဈအပကျြကနေ သူ့ဘ၀ပွောငျးလဲသှားတဲ့အခါမှာတော့…….
Jung Ba Reum တဈယောကျ ဘယျလိုပွောငျးလဲသှားတာလဲဆိုတာ စောငျ့မြှျောကွညျ့ရှုလိုကျပါဦး
Vagabond ပြီးထဲက လွမ်းနေရတဲ့ မင်းသား Lee Seung Gi နဲ့ Oh! My Gran movie ထဲက မင်းသား Lee Hee Jun တို့ပါဝင်ထားပြီး မင်းသမီးတွေက Zombie Detective(2020) ထဲက Park Joo Hyun နဲ့ Train(2020)ထဲက Kyung Soo Jin တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်းအရေအတွက်က (၂၀)ပိုင်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် (ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ကြာသပတေး)နေ့များမှာ tvNရုပ်သံကနေ ထုတ်လွှင့်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းရဲ့အဓိကချက်က ဒီမေးခွန်းနဲ့ စတင်တယ်
“မင်းသာ မျိူးရိုးဗီဇစမ်းသပ်ချက်ကနေ မိခင်ဝမ်းထဲမှာပဲ စိတ်ပညာကို စမ်းသပ်နိုင်မယ်ဆို….ပြီးတော့ အဲ့ကလေးက ဆိုက်ကိုတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် မင်း အဲ့ကလေးကို မွေးဖွားခွင့်ပေးမှာလား”
Jung Ba Reum ဟာ ရဲဝန်ထမ်းအသစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ တာဝန်ကျနေချိန် အစဉ်လိုက်လူသတ်သမားတစ်ယောက်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြုံတွေ့လိုက်ရတယ်။ ကံကောင်းလို့မသေပဲ အဲ့အဖြစ်အပျက်ကနေ သူ့ဘ၀ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါမှာတော့…….
Jung Ba Reum တစ်ယောက် ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတာလဲဆိုတာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဦး
Last air date2021-05-06
Episode runtime76 min
Home PageMouse (2021) Complete
Doctor John (2019) Complete
Gotham (2014) Season5Complete